Articles tagged ' draft constitution'
NCA threatens court action over referendum 8 February 2013 HARARE - A pro-democracy group says it will take the Zimbabwe Electoral Commission (Zec) to court if the body fails to give Zimbabweans ample time to study the draft constitution before the referendum. The National Constitutional Assembly (NCA), a broad alliance of opposition parties, church grou...
'Draft constitution: Hold onto champagne bottles' 21 January 2013 HARARE - Negotiators to Zimbabwe s recently agreed draft constitution are fearing that Zanu PF might pull another Houdini act and derail the democratic reform process. Regional Integration minister Priscilla Misihairabwi-Mushonga said they were now on tender hooks awaiting the politburo decision....
Mugabe in bid to break constitution deadlock 16 January 2013 HARARE - President Robert Mugabe is moving to break the constitution deadlock, and convened a meeting on Monday after rushing back home from his annual vacation in the Far East. As first reported by the Daily News, Mugabe was forced to cut short his travel to the Far East to return home to attend...
Bid to stop Copac conference 18 October 2012 HARARE - Zimbabwe s plans to hold an indaba to pave way for the crafting of a new constitution which sets terms for holding of new elections are in danger of collapse following a lawsuit filed in the High Court yesterday seeking to stop the process. Danny Musukuma, whose public profile is not kno...
Principals meet over Copac deadlock 11 September 2012 HARARE - Prime Minister Morgan Tsvangirai and President Robert Mugabe will today seek to get the Constitution making process back on track as they re-open negotiations to break the Copac impasse. Tsvangirai and Mugabe also met around 3pm yesterday afternoon to discuss the festering Copac deadlock...
Vote 'Yes': Tsvangirai 9 September 2012 HARARE - Prime Minister Morgan Tsvangirai yesterday launched a Yes vote for the draft constitution in Harare, declaring talks with President Robert Mugabe are dead. Tsvangirai, who was addressing his MDC structures at the Harare Showgrounds in the capital, said he will not be drawn into any furth...
Zanu PF's constitution bargain 5 September 2012 HARARE - Officials from President Robert Mugabe s Zanu PF are offering coalition partners a bargain to break the deadlock over a new constitution. Zanu PF says the parties must conduct an audit of a draft negotiated by the three parties under the auspices of a parliamentary body known as Copac ag...
ZCTU endorses draft constitution 2 September 2012 HARARE - Zimbabwe Congress of Trade Union (ZCTU) has endorsed the draft constitution saying it had been approved by the workers in the country. ZCTU secretary-general Japhet Moyo said the ZCTU supreme body, the general council approved the draft constitution arguing that it was a better devil as ...
'Joshua Nkomo would be happy with draft' 1 September 2012 BULAWAYO - Zapu President Dumiso Dabengwa said the late Vice President Joshua Nkomo would be very happy with the Constitutional Select Committee (Copac) draft constitution although it needs to be polished up. There are several positive formulations in the current draft. Actually from a Zapu point...
PM seeks draft support 31 August 2012 HARARE - Prime Minister Morgan Tsvangirai will from next week (September 8) embark on a constitutional campaign in which he will urge Zimbabweans to support the draft constitution. The PM yesterday told more than 50 civic society members at a meeting in Harare that he is set to travel around the ...
No more negotiations - Tsvangirai 29 August 2012 HARARE - Prime Minister Morgan Tsvangirai yesterday declared that he will not negotiate with President Robert Mugabe for the inclusion of Zanu PF s amendments into the new draft constitution. Tsvangirai told journalists at his monthly briefing that he would not be part of a group of three people ...